May 2018 – siifsiin
Gareen wal gargarsaa dhaabbata namoota sadarkaa sadii qaba. Gareen wal gargarsaa “CLA” fi Tiinaatti. Gareen kun miseensotaa 15-20 dhiiraa fi dhalaan wal makaadha. Walii galattii namoota 15-20 namoota wal beekan fi haalli jireenyaa isaanii wal fakkaatu, akkasumas haalli galii isaanii wal fakkatu waliin ta’uun garee wal gargarsaa tokkoo kan qabaniif, seera mataa isaanii kan qabanidha. … Continue reading Ga’ee garee wal gargaarsaa of-danda’insaa nyaata mirkaneessuu
Godina Shawaa Bahaatti kan argamtuu magaalaa Adaamaa Keessatti dubartootni baay’een jireenya isaani kan gaggessan karaa adda addan ta’uus, baay’een isaani daldaala xixxiqqoo irratti bobba’udhani. Taa’umsi magaala kanaa dhiyeenya magaala finfinneetti qabduu irraan kan ka’e guyyaa tokkotti namootni baay’een gara magaalaa kanaa ni dhufu. Daldaalli magaalaa kana keessaa baay’ee ho’adha. Kanaaf dubaartoonni magaalaa kanaas jireenyi isaani … Continue reading Dubartoota Garee wal gargaarsaa Magaalaa Adaamaa
May 31, 2018 January 28, 2019 Leave a comment